Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : Nametraka fitokisana tamin’ny Filoha ny Firenena Mikambana -
AccueilRaharaham-pirenenaAdy amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : Nametraka fitokisana tamin’ny Filoha ny Firenena Mikambana
09/05/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Scaling Up Nutrition” na SUN. Isan’ireo firenena 51 mpikambana eo anivon’ity hetsika iraisam-pirenena miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ity i Madagasikara. Efa manodidina ny dimy taona isika izao no mpikambana feno eo anivon’ny SUN.
Araka izany, mandalo eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao, ny sekretera jeneraly lefitry ny Firenena Mikambana (ONU) sady mpandrindra ankapobeny ny hetsika iraisam-pirenena “Scaling Up Nutrition” (SUN), Gerda Verburg.
Omaly, noraisin’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ity solontenan’ny Firenena Mikambana miandraikitra ny SUN ity. Tamin’izany indrindra no no nanambaran’ny sekretera jeneraly lefitry ny ONU, Gerda Verburg, fa afa-po tamin’ny dinika nifanaovany tamin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny tenany. Noho ny fahatsapany ny fahavononan’ny Filoham-pirenena amin’ny fitarihina sy amin’ny fanetsehana ireo mpiara-miasa aminy rehetra amin’ny ady atao amin’ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara.
Noho izany indrindra, nametraka ny fitokisana tamin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny solontenan’ny Firenena Mikambana sy ny Firenena Mikambana manontolo. Voalaza mantsy fa isan’ny sakana iray amin’ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin’ny firenena ny tsy fanjarian-tsakafo. Izany indrindra anefa no anisan’ny mampirisika ny Fitondram-panjakana hanao ezaka hiady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo amin’izao fotoana izao.
Ankoatra izay, voalaza fa hampiakatra hatramin’ny 15%-n’ny fiharian-karem-pirenena ny fandavorariana ity hetsika SUN ity. Antoka ho amin’ny fampandrosoana mantsy ny zaza tomady sy ampy sakafo mba ahafahan’izy ireo manaraka tsara ny fampianarana araka ny tokony ho izy sy handraisan’izy ireo andraikitra eo amin’ny fiainam-pirenena. Voalaza ihany koa fa hatramin’ny faha-1000 andron’ny zaza iray, ilaina ny fanaraha-maso manokana mba hahafahany mivelatra ara-tsaina sy mitombo ara-batana.
Etsy andaniny, miara-mientana amin’ity hetsika ity avokoa ireo rantsa-mangaikan’ny Firenena Mikambana mba handresy lahatra ireo mpamatsy vola maro maneran-tany mba hanampy amin’ny fanatontosana ny hetsika.